Umphakathi wanamuhla uye lasuka kungaphelele kusukela cishe zonke ngamasiko asendulo ekhona. Ngakho-ke akuyona ukuthambekela isimanga ukukhetha amagama sokuqala izingane zabo. Kwabaningi-ke Kunzima ukucabanga ukuthi umuntu ungabiza ingane Coley uma wazalwa St Nicholas Day, noma yimuphi, uma ngingaphansi ugogo wakhe. Doesnt ugqozi abazali akukho izibalo esiseBhayibhelini noma esisemlandweni Nokho, njengoba izwe yobuciko - umculo nama-movie - ayinayo nomthelela kakhulu. Manje sithola amasiko ngokuphelele entsha, okuyinto nethonya eliqondile ngalokho amagama zesifazane ethandwa sipha amantombazane zabo ezisanda kuzalwa.
izitayela fashion noma bethanda?
Yebo, amagama yesimanje angase okungenani eziholela ukushaqeka yobuhle iyiphi ukhokho, kodwa kanjani ukuphikisana esizukulwaneni esisha? omama imfashini bakholelwa ukuthi yinqaba, ezithakazelisa kakhulu futhi kangcono. Abanye kubathatha ingxenye yegama sabazali futhi negama usana uthole izwi. Ngakho kwakunabantu abangu-amagama abesifazane efana Yufreysi futhi Arislandii. Abaningi pick up inguqulo yasekuqaleni angaphandle ngokubhalisela ingane yakho nge zokuqala "esiyingqayizivele" futhi-ke ngeshwa, akuyona ngaphandle amaphutha. Ngakho singasho kugcwale umlomo ukuqedwa ukucwaninga kule ndawo. Make sibone ukuthi kungenzeka ukuhlonza amagama zesifazane ethandwa kakhulu kule lokudlela.
Indlela ukukhetha phakathi kwawo lowo Kungaba mnandi futhi original umsindo, kodwa ngesikhathi esifanayo wenze umqondo? Lapho ekhetha igama intombazane , abazali abaningi futhi ufisa ukuthi sekukuhambela kahle igama phakathi kunquma ojabulayo kuyindlela yokuphila, uma umama nobaba zikholelwa ukuthi lokhu kungase kuthonye umlingisi esizayo.
Uma ubheka izibalo ejensi ukuthi ubhalise izinsana, kulo nyaka amagama zesifazane ethandwa kakhulu - kuyinto Sofia (Sofia), Maria (uMariya), Darya, Anastasia, Victoria, Anna uPolina, Elizabeth uBarbara. Ngingathanda ukuba zihlale kubo "zendabuko" igama ethandwa, ngoba bona amandla athile kanye nenani, futhi okubaluleke kakhulu, kubangele izinhlangano emnandi.
Kulo nyaka, Inyoka Chinese Horoscope nencazelo ekhethekile kuba igama Sofia ngoba kusho "ukuhlakanipha." Intombazane egqoke ke, asihlali ithunzi, uzokwazi ukuxazulula inkinga ngokushesha, ngenxa yini masishane impumelelo, whatever zivela khona. Ngaphezu kwalokho, inhlanganisela uhlamvu sakuleli Sofia kuyinto ngokuvumelana umsebenzi futhi phlegmatic.
Mary - njengendlela Classic
Uma ucabangela amagama zesifazane ethandwa, akunakwenzeka ingasaphathwa Mary, nakuba inkulumo yeBhayibheli futhi manje zinhlanga umbhangqwana izinyawo ngezansi ngaphambi Amathrendi newfangled. La mantombazane zihlale bejabule, nobudlelwano futhi kancane abanganaki. Ngesikhathi esifanayo babe intando eqinile futhi bayakwazi ukwenza izinqumo ngokucacile futhi ngaphandle kokungabaza, ikakhulukazi uma kuziwa injabulo yomkhaya. Mary, ngaphezu kwakho konke, umhleli emangalisayo.
Futhi, cishe njalo ngonyaka, Anastasia liphakathi ethandwa amagama zesifazane - ". Eyodwa okuletha emuva ekuphileni" Nasty - olinganiselayo nokuzola abantu nezimo kunoma yisiphi isimo, kanzima-working nokuphikelelayo. Ngaphezu kwalokho, abaningi Anastasia ube umuzwa omuhle, ungesabi uthemba izwi elingaphakathi.
Abanye bacabanga igama esizayo ingane, uma nje ufunde ukukhulelwa, futhi umuntu esethatha ngomzuzu wokugcina, ebiza umntwana emva kokuzalwa. Futhi kungakhathaliseki ukuthi igama olukhethayo indodakazi yakho, akaphoqelekile ukuba ethandwa futhi yimikhuba kakhulu, kodwa - ofanelekayo ukuba incazelo.